28 Maalmood: Maalinta 2aad – Akhbaarta Wanaagsan
Posted on April 15, 2020 May 25, 2020 by Maroodiga
28 Maalmood ku baro Injiilka Matayos
MAALINTA 2-AAD: Akhri Matayos cutubka labaad.
Kuwo soo booqday ayaa ka yimid waddan fog oo dhinaca bari ah, kuwaas oo doondoonayey boqorka cusub ee dhashay ee Yuhuudda. Kuwan booqashada ku yimid yuhuud may ahayn—iyagu waddan kale ayay u dhasheen oo diin kale ayay aaminsanaayeen. Xaqiiqdiina, Yuhuuddu way ka cabsan jireen oo may aamini jirin nimanka noocan ah ee “xigmadda leh.” Iyaga waxaa loo yaqaaney Maagi, waa isla erayga “magic” ee af Ingriiska ah ee aynu maanta isticmaalno kan oo macnihiisu yahay “sixir.” Madaxdii Yuhuudda ayaa mar markan ka horreysey sheegay in haddii uu mid Yuhuud ahi Maagi noqdo, ay tahay in kaas la dilo. Xataa ninkii Herodotus la odhan jirey, oo ahaa taariikhyahan Giriig ahaa oo caan ahaa, isaguna wax fiican kamuu sheegin diintii Maagi-gu haysan jireen. Haddii uu Matayos doonayey inuu Yuhuudda ku dhiirigeliyo inay Ciise rumeeyaan, muxuu qisada Injiilka ugu bilaabayaa inuu ku sheego koox cawaan ah oo la nebcaa?
Jawaabtu waxay ku jirtaa habka uu injiilka Matayos u qaabaysan yahay. Matayos wuxuu injiilka isugu duba-ridayaa inuu tuso ama muujiyo sida uu Qorniinka Cibraaniga (Axdigii Hore) u dhisan yahay ama u habaysan yahay. Qisada ah Maagi-ga oo Ciise u imaanaya waxay tusaysaa ta ugu horraysa ee isu ekaanshahan qaab-dhismoodkooda . Xaggee ayuu Axdigii Hore ka bilowdaa? Haddii aad eegto cutubbada Bilowgii 1 ilaa 11, waxaad arki doontaa inay kuwaasi sheegayaan siduu Ilaahay adduunka oo dhan u danaynayey oo u daryeelayey. Laga bilaabo cutubka 12 ayaa qisadu isu beddeleysaa Ilaahay oo hal qof la shaqaynaya, kaas oo ahaa Ibraahim, iyo farcankiisii Yuhuudda ahaa ee Isxaaq iyo Yacquub. Inta kale ee Axdigii Hore waxay diiradda saaraysaa shaqadii uu Ilaahay Yuhuudda ka dhex qabtay. Laakiinse cutubbada ah Bilowgii 1-11 waxay ku saabsan yihiin bini’aadanka oo dhan.
Qisada ku saabsan nimankii xigmadda lahaa isla habkan ayay raacaysaa. Maagi-gu waxay metelyaan bini’aadanka guud ahaan, iyo Ilaahay oo iyaga ka dhex shaqaynaya. Tani waxay na xasuusinaysaa inuu Ilaahay dadka oo dhan daryeelo oo dadka oo dhan ugu yeedho inay isaga xidhiidh la yeeshaan. Kaddib marka ay nimanka xigmadda lihi waddankoodii dib ugu noqdaan, injiilka Matayos wuxuu diiradda saari doonaa noloshii Ciise iyo shaqadii uu ka dhex qabtay hal qolo oo dad ah—Yuhuudda. Laakiinse taasi way is beddeli doontaa marka aynu soo gaadhno dhammaadka injiilka. Mar kale ayaa haddana bini’aadanka oo dhan diiradda loo saarayaa ama loogu soo jeesanayaa.
Ciise wuxuu ahaa Boqorkii dhashay ee Yuhuudda, laakiinse Boqorkii Heerod wuu diidey isaga oo wuxuu isku deyey inuu isaga dilo. Laakiinse, Ilaahay ayaa Ciise badbaadiyey. Waxaa jira tusaalayaal badan oo injiilka ku jira markaas oo ay dadku isku dayeen inay Ciise dilaan, laakiinse Ilaahay ayaa isaga badbaadiyey ilaa ay shaqadiisii adduunku ka dhammaanaysey.
Qisada Injiilku maaha sheeko-baraley macaan. Waxaa iyada ku jira qalbi jab iyo silic. Noloshu mar kasta maaha mid caddaalad ah oo wanaagsan, sida marka uu Heerod xasuuqayo carruurtii yaryarad ee aan waxba galabsan. Laakiinse marka aynu qisada Injiilka guud ahaan u eegno, waxaynu arkaynaa inay iyadu rajo bixinayso. Ilaahay ayaa sharka ka weyn, oo wanaaggiisa ayaa aakhirka guuleysanaya. Taas ayaa iyada war wanaagsan ka dhigaysa.
Aayad ay tahay in la xasuusto—”Adigu Beytlaxam, oo dhulka Yahuudah ahay, Kuma aad yaridba caaqillada Yahuudah dhexdooda, Waayo, waxaa adiga kaa soo bixi doona taliye, Kan dadkayga Israa’iil u talin doona.”
Duco—Rabbiyow, adiga ayaa nimankii xigmadda lahaa ku hoggaamiyey inay Ciise doondoonaan oo isaga helaan, taas oo iyaga aad ugaga farxisay. Anigana sidoo kale igu caawi inaan farxad helo inta aan doonayo inaan Ciise u sii barto si dheeraad ah aniga oo akhriyaya Injiilka Matayos. Igu caawi waxa ay ka micne tahay inaanusan isagu adhijirka Israa’iil oo keliya ahaan ee uu sidoo kale adhijirkaygana noqdo. Aamiin.